Mataatuuda 14 qof ay raacaan oo meesha laga saarayo – The Voice of Northeastern Kenya
Mataatuuda 14 qof ay raacaan oo meesha laga saarayo
Star FM December 7, 2018
Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo kaabayaasha wadooyinka ee dalka Mr. James Macharia ayaa sheegay in muddo laba bilood gudahood ah ay suurtagal tahay in meesha laga saaro mataatuuda yaryar ee loogu talagalay inay qaadaan rakaab gaaraya 14.
Arrinkan ayaa dhici karo hadii wasaaradda gaadiidka ay dhaqangeliso qorshaha lagu soo afjarayo isticmaalka gaadiidka dadweynaha ee PSV ee aynan rakaab badan ku safrin.
Mr. Macharia ayaa carrabka ku dhuftay in laga billaabo bisha labaad ee sannadka cusub gudaha Nairobi ay ka howlgalayaan 11 tareen iyo basaska waweyn ee qaadi karo 64 qof.
Wasiirka ayaa cariiriga ka jira magaalooyinka Nairobi, Mombasa iyo Kisumu u aaneeyay mataatuuda yaryar ee tirada badan.
Waxaa uu sido kale wasiirku sheegay in ugu horeyn qorshahan laga hirgelin doono Nairobi ka hor inta aanan muddo laba sanno gudahood laga fulin degaanada kale ee wadanka.
Hasa ahaate urur matalaya mataatuuleyda dalka ayaa ka soo horjeestay dhaqangelinta qorshaha dowlada.
Dhanka kale barasaabka ismaamulka Nairobi Mike Sonko ayaa senetarka dowlad degaanka Johnson Sakaja ka codsaday inuusan siyaasad ka dhigin dadaalka lagu doonayo in lagu xalliyo zaxmadda dhanka baabuurta.
Dhawaan ayay ahayd markii Mike Sonko uu gaadiidka dadweynaha ka mamnuucay farasmagaalaha taasi oo ay saameyn ka dhalatay.
Sido kale senetarka Nairobi Mr. Sakaja ayaa maxkamadda geeyay dacwad uu go’aankaasi uga soo horjeedo.
In kastoo hal maalin kadib markii uu amarkaasi dhaqangalay uu Sonko dib uga laabtay haddana wuxuu ku adkeysanaya inay lagama maarmaan tahay.
Guddoomiyaha Nairobi ayaa ku nuuxnuuxsaday in marnaba aanan laga hor istaagi karin fulinta barnaamijyada iyo mashariicda xal u noqonaya dhibaatooyinka jira xita hadii siyaasiyiinta kale ay kaga soo horjeestaan
← Dowladda oo 30 bilyan u qoondeysay horumarinta xirfadaha
Agaasimaha shirkadda Kenya Pipeline oo la xiray →